Miankina amin'izay anontanianao, ny mailaka dia teo anelanelan'ny 30 sy 40 taona. Mazava ny hasiny, miaraka amin'ireo fampiharana manerana ny lafiny sosialy sy matihanina amin'ny fiainana. Ny hita ihany koa anefa dia ny teknolojia mailaka efa antitra. Amin'ny lafiny maro, averina alefa ny mailaka mba hijanona ho manan-danja hatrany amin'ny filan'ny mpampiasa ankehitriny.
Fa isaky ny inona no azonao atao ny mifampiresaka zavatra alohan'ny hiainanao fa efa lasa ny fotoana? Rehefa manomboka mandinika ny fandrika ateraky ny mailaka ianao ary mamantatra ireo faritra hatsaraina, manomboka mahatsapa ianao fa hafa tokoa ny "mailaka 2.0" raha natsangana sy natomboka androany. Inona avy ireo fiasa tokony hampidirina na hatsaraina? Ary inona no hajanona? Mety hametraka amin'ny fampiharana hafa ve ny endriny vaovao?
Raha te hamerina handefa mailaka isika anio, ireto misy fototra enina mety ho sehatra mailaka vaovao. Tsy haiko ny momba anao, fa raha afaka mampiasa an'ity rafitra ity aho dia ho toby iray sambatra sy mahomby kokoa…
Raha vantany vao azontsika tsara ny fomba 'famantarana' sy ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpampiasa, dia afaka manala ny boaty fampidirana isika. Ie, ny boaty. Ny mailaka 2.0 dia tsara kokoa hanompoana ny orinasa sy ny mpanjifa raha toa ny 'fifampiresahana' na ny kofehin'ny hafatra tsirairay manalavitra karazana siny 'fisamborana rehetra', na ilay boaty. Ny fantsom-pifandraisana mivantana eo anelanelan'ny orinasa sy ny mpihaino azy dia ho fanatsarana ankasitrahana.
Ny toetoetran'ny adiresy mailaka sy ny habaky ny spam dia midika koa fa lasa zatra viriosy, fikasana phishing ary scam isika. Raha tsy misy ny tsy fivadihana, dia voarara ny zavatra hafa azo atao amin'ny 'famerenana amin'ny laoniny'. Noho izany, amin'ny mailaka 2.0, izahay dia te-hahafahana mandoa faktiora, manasonia antontan-taratasy tsiambaratelo ary manendry ny fananana ara-tsaina. Tsy hitranga izany raha toa ka misy fantsona azo antoka sy voahidy voasokatra eo anelanelan'ny mpandefa sy ny mpandray ka miantoka ny tsy fandavana azy.
Ny firoboroboan'ny finday haingana dia manondro fa mety ho fotoana ho an'ny sehatra iray izay natao hiorina amin'ny eritreritra fotsiny ny fampiasana finday. Mandeha haingana be kokoa ny fiainana noho ny tamin'ny 30 taona lasa ary miaraka amin'izany, lasa ireo mailaka lava sy sary HTML mahafinaritra izay tsy misy dikany. Aleon'ny olona mifampiresaka amin'ny fampiasana teny vitsivitsy fotsiny, matetika amin'ny alàlan'ny sehatra fifampiresahana. Ka ny mailaka 2.0 dia mila miantoka fifandraisana tsara kokoa; fohy, ara-potoana ary natao hovakiana amin'ny telefaona finday na aiza na aiza misy azy eto amin'izao tontolo izao.